Madaxda Afrika oo ka dalbaday Madaxweynaha Burundi in doorashada dib loo dhigo – Radio Daljir
Juunyo 2, 2015 2:06 b 0
Talaado, Juun 02, 2015 (Daljir) — Madaxda dalalka Bariga Afrika ayaa Madaxweynaha dalka Burundi, Pierre Nkurunziza ugu baaqay inuu dib u dhigo doorashada bishaan Juun ka dhici doonta dalkiisa, xilli ay socdaan mudaaharaadyo rabshado wata oo looga soo horjeedo inuu mar saddexaad ka qaybgalo doorashada madaxnimo ee Burundi.
Shirka ay Madaxda Bariga Afrika ku yeesheen dalka Tanzania ayaa laga soo saaray baaq ah in la joojiyo rabshadaha ka socda Waddanka Burundi iyo dibad-baxyada ka dhanka ah madaxweynaha dalkaas la hakiyo.
War-saxaafadeed laga soo saaray shirka Hoggaamiyeyaasha Bariga Afrika ayaa lagu xusay in xiisadaha dalka Burundi ay khatar gelin karaan Qarannimada wadankaas oo ayna abuuri karaan colaado sokeeye oo dib uga qarxa Burundi oo sannadkiii 2005-tii colaado sokeeye oo uu dhiig badan ku daatay.
Shirkan ayaa Waxaa ka Qayb-galay Madaxweynayaasha Tanzania, Kenya, Uganda, iyadoo uu sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweynaha Koofur Afrika oo madaxda Gobolku ay ku casuumeen shirkaas.
Madaxweynaha dalka Burundi, Nkurunziza ayaa ka maqnaa Shirkan, kaddib markii dalka Burundi uu ka dhacay bishii hore Af-gambi Fashilmay oo lagu sameeyay, isagoo dib ugu laabtay dalkiisa maalin kaddib markii uu afgambigu dhacay.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 90-ku oo qof ay rabshadaha ka socda dalka Burundi ka ku barakaceen, kuwaasoo galaay dalalka dariska la ah dalkaas, iyadoo lasoo sheegayo in Barakacayaasha reer Burundi ay lasoo gudboonaadeen xaalado nololeed.
Ugu dambeyn, Mudaaharaadyada ka Socda Burundi ayaa Waxaa ku dhintay dad ka badan 25-qof oo ay ku jiraan askar ciidamada Ammaanka ka tirsan, kuwaasoo qaar ka mid ah ay toogasho ku dileen ciidamada amniga dalkaas xilli ay rabshado socdeen.